Al-Jazeera Eng. Tv.com
VOA Somali 4pmVOA Somali 7pmVOA Somali 8pm Taariikh nololeedkii Ciyaaryahanka Soomaaliyeed ee Dr: Yusuf Maxamed Maxamuud oo loogu naanaysi jiray (Yusuf Shaqaaq).
Waa taariikhdii ciyar yahanka Yuusuf Maxamed Shaqaaq
Dr. Yusuf Maxamed Maxamuud -oo bahda isboortiga ay ugu yeeraan Yusuf Shaqaaq- wuxuu ku dhashay Xaafadda Cabdicasiis , Magaalada Muqdisho, Waxbarashadiisa heerka dugsiga hoose ,dhexe iyo sareba waxaa uu ku qaatay isla dalka Soomaaliya, aqoontiisa guudna waxaa ay gaarsiisan tahay heer jaamacadeed isaga oo ku takhasusay cilmiga xanaanada xoolaha iyo daaqa.
Shaqaaq waxaa uu ka mid ahaa ciyaaryahannadii ugu qiimaha badnaa ee soo mara kubbadda cagta Soomaaliyeed, waxaa uu ahaa isku-xiraha kooxdiisa jeenyo iyada oo lagu xusuusto No: 8, sidoo kalena waxaa uu ahaa xubin firfircoon oo aan looga maarmin xulka qaranka.
Yuusuf Shaqaaq waxaa uu horseed ka ahaa guulo faro badan oo ay kooxdiisa jeenyo gaartay, sidoo kalena waxaa uu guulo faro badan la qaybsaday xulka qaranka oo uu muddo badan ka mid ahaa.
Yusuf wuxuu bilaabay ciyaaraha gaar ahaan kubbadda cagta isagoo aad u da� yar aadna u jeclaa ciyaartaasi, waxaan markii ugu horreysay ciyaaraha ku dhiirri-galiyay allaha u naxariistee aabahiis Maxamed Maxamuud Shaqaaq oo waayahaas ka mid ahaa maamulayaasha naadiga Munishiibiyo oo markii dambe la oran jiray Muqdisho.
Dhiirrigalinta labaad wuxuu ka helay isagoo 12 jir ah macallin ka yimid dalka Talyaaniga oo u yimid kooxda Munishiibiyo lana <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />oran jiray Sergio Del Beto oo markaasi cayartiisa ugu horreysay siiyay qalab Isboorti oo uu ku ciyaaro.
Yusuf yarantiisa wuxuu ka qeybgalay ciyaarah degmooyinka isagoo u soo saftay degmand C/Casiis ciyaarta kubadda cagta iyo kubadda koleyga (Minibasket).
1974kii wuxuu ku biiray kooxda Warshadda Caanaha oo markaasi ka tirsaneyd kooxaha heerka 2aad (SeriaB), waxaana macallin u ahaa Tuke.
1975 Ayuu ku biiray kooxda Jeenyo ee heerka 1aad (Seria A), isagoo ka tirsanaa kooxda ilaa iyo 1984. Muddadii uu kooxda Jeenyo u ciyaarayey wuxuu ku guulestay 2 horyaal iyo 8 koobka Jeneral Da�uud.
1976 Yusuf wuxuu ka mid noqday cayaartooyda Xulka Qaranka. Intii u cayaaraha ku jiray waddanmadii uu ku soo ciyaaray waxaa ka mid ah Masar, Liibiya, Marooko, Tuniisiya, Nijer, Zimbabwe, Kenya, Suudaan IWM.
1983/84 Yusuf waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa (Best Player) 1984 kooxda Jeenyo oo aad ugu rajo weyned inay ku guulaysato koobkii Horyaalka oo dhibco tirsi ahaa,ayaa waxey la ciyaartay kooxda Wagad kana badisay, haseyeshee dhibcihii ayaa laga qaaday iyadoo logu eedeeyey in Wagad ay sii deeysay.
Taasi waxaey keentay in Jeeny iyo Madbacadda ay isku dhibco noqdaan, deedna ay wada ciyaraan ciyaar kamadambeyn (Final)ah halkaasi oo ay guushu ku raacaday Kooxda Madbacadda, oo noqotay horyaalka Soomaalia.
Guuldaradani waxey aheyd guuldaradii ugu xumeyed ee Shaqaaq soo marta intuu cayaaraha ku jiray, iyadoo cayaartani ay ahayd ciyaarihii ugu dambeeyay ee uu ka qayb-qaato. Farxaddiisi ugu weyneyda waxey aheyd markii aay u soo gudubeen wareeggii labaad ee ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika, isagoo markaasi ku ciyaarayay magaca naadiga Madbacadda.
Isku soo wada duuboo waxaad modaa in Shaqaaq markuu maqlo magaca kooxda Madbacadda uu marna soo xusuuto farxad weyne marna guuldarro weyn.
Ciyaaryahannadii uu ugu jeclayaa inay garbahiisa buuxiyaan markuu u ciyaarayey kooxda Jeenyo � LL.PP� iyo xulka qarankaba waxaa ka mid ah: Maxamed Xaaji Ureey oo aay jaanta aad isula heli jireen , Sidoo kale Cabdishakuur, iyo Ayuub �Allaha u naxariistee�.
Dhanka qaranka inkastoo xilliba ciyaartooy ay masilayeen kooxda qaranka ee uu la kulmayay ciyaartooy kala gadisan oo tiro badan ,misana ciyaartooydii uu ugu jeclaa waxaa laga xusi karaa:Khaliif Riko, Muriidi, Xasan Neero, Nuure, iyo Eenow.
1984kii Shaqaaq markuu ciyaaraha ka fariisatay wuxuu gacanta ku soo qabtay, ee uu soo layliyay 2 sannadood kooxda kubbadda cagta ee gobolka Banaadir, sidoo kale naadigii Gaadiidka ee heerka 2aad oo iyagu ku guulaystay koobkii kaalinta 1aad ee Juunyeeriska, dabadeedna waxaa loo dhiibay inuu layliyo ciyaaryahannada heerka 1aad ee Gaadiidka isaga iyo macallin Tuke oo iyaguna aay ku guulaysteen koobkii Jeneraal Da�uud�Dabadeedna waqtigii ayaa ciriiri ku noqday oo wuu ka gaabsaday gabi ahaanba ciyaaraha.
Yuusuf haatan waa uu leeyahay Xaas iyo leh 6 caruur ah, waxaana uu ku nool yahay gobolka Ontario (Toronto-Canada).